Inyuvesi isilaxaze i-KPMG | News24
Inyuvesi isilaxaze i-KPMG
Johannesburg – Umkhandlu wase-University of the Witwatersrand uthathe isinqumo emhlanganweni obungomhlaka 29 Septhemba 2017, sokungazivuseleli izinkontileka enazo ne-KPMG zokucwaninga amabhungu kanye nezokwenza eminye imisebenzi, uma seziphelelwa yisikhathi ekupheleni konyakamali ka-2017.
Lesi sinqumo sithathwe ngemuva komhlangano nesikhulu esiphezulu se-KPMG, ebebemele i-KPMG emazweni emhlaba kanye namalungu ekomidi labacwaningi kanye nele-Council Risk enyuvesi.
Lokhu kulandela umhlangano waphambili – emasontweni amabili edlule – owawuphakathi kwabaphathi baseWits kanye nababemele i-KPMG.
“Amalungu ekomidi leCouncil Audit nele-Council Risk azicubungule kabanzi ziphakamiso ze-KPMG.
OLUNYE UDABA: Amaphoyisa athungatha obaleke nengane
“Amakomidi ayavuma ukuthi i-KPMG zikhona izinyathelo ezithathile, okubalwa kuzona nokukhipha esikhundleni isikhulu esiphezulu kanye nezinye izikhulu ukuzama ukulungisa umonakala owadala ukuba nobudlelwane nomndeni wakwaGupta nezinkampani zawo, kodwa labona ukuthi ayenzanga okwanele.
“Ngaphezu kwalokho, kuvunyelwene ngokuthi i-KPMG yehlulekile ukubeka zonke izinto obala, ngakho kunzima ukukholwa ukuthi akukho okuphambene nomthetho abakwenza njengokuba besho,” kusho isitatimende.